Waa maxay jilicsanaanta iyo sidee loo sameeyaa? Saadaasha Shabakadda
Waxay kuxirantahay jawiga jawiga ee jira daqiiqad kasta, had iyo jeer ma heli karno nooca saxda ah ee roobab. Taasi waa, ma awoodi karo had iyo jeer roob, baraf ama roobdhagaxyaale, laakiin sidoo kale waxaa jira qabow. Waa dhacdo dabiici ah oo ay jirto roobab qaab roob iyo baraf. Si ay ifafaaladani u dhacdo, xaaladaha qaarkood ee jawiga iyo cimilada waa in la buuxiyaa. Intaa waxaa dheer, noocan noocan ah ee saadaasha hawada ayaa sidoo kale sababa sii xumeynta sida barafka.
Waxaan ku caddeyn doonnaa waxaas oo dhan oo ku saabsan jilicsanaanta iyo jilicsanaanta qoraalkan.
1 Waa maxay jilicsanaanta iyo goorma ayey dhacdaa?
2 Sifooyinka jilicsan
3 Waa maxay jilicsan
Waa maxay jilicsanaanta iyo goorma ayey dhacdaa?
Waxaa jira waqtiyo markii xaaladaha deegaanku kala duwan yihiin. Sida aan ognahay, doorsoomayaasha saadaasha hawada ee kala duwan ayaa ah kuwa xukuma xaaladaha deegaanka markasta. Waxay kuxirantahay qiyamka cadaadiska Hawada, heerkulka, nidaamka dabaysha, daruuraha, qoyaan, iwm Waxaa jiri kara nooc nooc roob ama mid kale. Waxa ugu caansan waa haddii heerkulku ka sarreeyo 0 digrii oo qoyaanku sarreeyo, roobabku waxay ku yimaadaan qaab roob ah.
Dhinaca kale, haddii heerkulku ka hooseeyo 0 darajo ama aynu joogno joog sare, halkaas oo cadaadisku ka hooseeyo, waa ka badan tahay ama suuragal tahay in roobabku ku dhacaan qaab baraf ah. Si kastaba ha noqotee, xaaladahan deegaanka ee soo noqnoqda maahan inay ahaadaan "aabbahayo" saadaasha hawada, laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban sida qabow.
Sleet waa nooc roob ah oo roobka iyo barafku isku mar dhacaan. Qayb ka mid ah roobabku waa barafoobay oo qaabab kale ayaa dhibco biyo ah ama kiristaalo yaryar oo baraf ah. Si biyaha barafka loo soo saaro waa inay jiraan xaalado deegaan oo aad u sax ah. Waana inay dhacaan kaliya markay hawadu kulushahay inay bilawdo inay dhalaasho barafka, laakiin iyadoon gebi ahaanba dhalaalin. Hawada noocan ah waxay kaloo kuxirantahay joogga, huurka iyo nidaamka dabaysha. Sleet had iyo jeer ma dhici karto xitaa haddii heerkulka hawadu yahay mid ku habboon si biyuhu bilaabaan inay dhalaasho laakiin gabi ahaanba ma dhalaalaan.
Kiristaalo baraf ah oo loo yaqaan 'flakes' waa qaab lix geesood ah marka si dhow loo eego.
Sleet inta badan dhulka kuma adka, laakiin waxay qaadataa muuqaalka maaddaama ay ka soo dhacayso daruuraha. Caadi ahaan, haddii heerkulka dusha sare uu ka hooseeyo eber darajo, jajabku laftiisa wuu adkaan karaa oo sameysan karaa baraf baraf ah marka uu ku soo dhaco dusha sare. Dhanka kale, qaboojinta jajabyadaan dhulka ka sameysan waxay sameyn karaan waxa aan u naqaano sida go'yaal baraf ama dhaxan.
Dhakhaatiirta saadaasha hawada qaarkood, qabowgu waa nooc roob ah oo biyuhu qayb ahaan baraf yihiin, laakiin maahan inay ahaato mid u eg madmadow. Taasi waa, uma baahnid qaab laba-geesood ah oo caan ah oo nooca roobka.
Barafka ku dhaca roobka noocan ah aad ayey ufiican tahay mana sameysmayo qaab dhismeedyo cakiran. Qaab dhismeedka wanaagsan wuxuu dhacaa marka heerkulku diirran yahay oo dhalaali karo barafka, laakiin aan dhab ahaan biyo u rogin. Sababtaas awgeed, inta lagu jiro xilliga qaboobaha, waxaan arki karnaa dhibco biyo ah oo ku dhowaad dhalaalay qaabka barafka iyada oo aan noqon kareyn iyo qaar ka mid ah baraf barafka in, iyagoo cabbirkoodu ka sii dhumuc weyn yahay, waqtigana aan dhalaalin oo ay dayactiraan qaab-dhismeedkooda guud.
Malaha aragtida waxay umuuqataa nooc baraf caadi ah, laakiin markii si dhow loo fiiriyo ama lagu arko mikroskoobka, waxaa la ogaan karaa in miro u eg kuwa roobdhagaxyada la sameeyo halkii laga heli lahaa kareemooyin baraf buuxa leh oo leh qaab laba-geesood ah. Xaaladdan oo kale waa baraf yar oo amorphous ah.
Farqiga u dhexeeya roobabkan roobabka waxaa inta badan lagu arkaa halabuurka. Dhibcaha biyuhu waa dareere isku jir ah, roobdhagaxyaalaha waxay leeyihiin biyo xaalad adag, biyaha barafka waxay ku ciyaaraan baraf jilicsan iyo baraf baraf ah.
Waa maxay jilicsan
Biyaha barafka waxaa lagu bixin karaa xaalado kala duwan. Waa suurtagal in doorsoomayaasha kale ee saadaasha hawada sida qoyaanka, cadaadiska Hawada iyo, sidaa darteed, nidaamka dabaysha ayaa sababa duufaan noqon kara kan ugu xasilloon ee loo rogo baraf. Sleet waa wax aan ka badnayn duufaanno duufaan wata.
Waa dhacdo dabiici ah oo aan ku daawan karno duufaan biyo iyo baraf ah oo aad ugu fiican dhismayaasha isla markaana si xoog leh iyo masaafo aad u fog ugu barakacay ficilka dabaysha. Si uu roobku u dhaco, qoyaanku waa inuu noqdaa qiyaastii 100% hawaduna waa inay ka hooseysaa eber darajo. Xaaladdan oo kale, qodobka ka dhigaya baraf-barafka inay u dhalaalaan barafka amorphous waa dabaysha iyo hoos u dhaca cadaadiska jawiga. Caadi ahaan, ifafaalahaani wuxuu u muuqdaa mid ay weheliso diirimaad.
Waxay badanaa ku dhacdaa meelaha buuraha dhaadheer leh, halkaasoo cadaadiska hawadu uu hooseeyo sababo la xiriira joogitaankiisa sare iyo qoyaanka oo sare loogu sii hayn karo cufnaanta geedaha awgeed. Waxay kaloo kuxirantahay dhirta iyo nooca ay tahay. Haddii cufnaanta la xoqay ma awoodi doonto inay ilaaliso qoyaanka sida ugu sareysa. Si qiimayaashan qoyaanku u dhacaan, qoyaan badan ayaa loo baahan yahay, badanaa waxaa sameeya aagagga keymaha ee cufnaanta iyo dhererka weyn.
Marka lagu daro huurka, duufaanka iyo cadaadiska hoose ee joogga, waxaa jiri doona dabaylo xoog badan oo ku filan oo sababi kara duufaan qabow halka jajabyada barafka amorphous ay dhalaalaan. Dhacdadani waxay dhacdaa labadaba deyrta iyo jiilaalka iyo gu'ga labadaba. Waa mid soo noqnoqota xilliga guga marka uu jiro dhaxan gaar ah cufnaanta kayntuna way sarreysaa iyadoo ay ugu wacan tahay ubax iyo xilliga horumarinta dhir badan.
Sidaad u aragto, dabeecadda ma jirto dhacdo gebi ahaanba calaamadeysan oo lagu aasaasay astaamo gaar ah. Waxaan nahay kuwa kala soocaya ifafaalaha si aan si fiican u fahamno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Ciidda